Ngemuva konyaka wezenzakalo ezingalindelekile nezehlakalo ezingalindelekile, iTrovaWeb ikufisela amaholide amahle futhi aqine kunanini ngaphambili
Ibhalansi enqobayo phakathi kwezithiyo ezingalindelekile nezinhloso ezinhle.
Il 2020 kwakuwunyaka ongajwayelekile ngezindlela eziningi. Umhlaba wonke, ngaphandle kokukhetha, uzithole ubhekene nezingqinamba ebezingacabangeki kuze kube muva nje. Ngoba I-TrovaWeb, bonke ubunzima, zonke izinkinga, konke ukukhathazeka, kube yithuba lokucabanga kabusha i- imodeli yenhlangano futhi uqhubeke ngobukhulu nokuzimisela okukhulu.
Enye yezimpawu zethu Ukuqalisa Kwezobuchwepheshe bekulokhu kumayelana nokuhambisana nesikhathi nokwazi ukuthi ungazivuselela kanjani ukuze uhlale eceleni kwamakhasimende nezinkampani. Akukaze kube njengakulesi sikhathi, lawa makhono afanele abonakale ephumelela ukuziqinisekisa phakathi kwe- izinkampani eziqinile we-panorama yase-Italy.
Izithiyo Nokunqoba: ITrovaWeb inqobe unyaka ogcwele ubunzima phambili
Uma kukhona igama elingenza kude ukude imizwa yalokhu okuvelele 2020, Ngikholwa wukuthi abaningi bazovuma ngokusho Ukukhathazeka. Unyaka wezi-2020 bekungunyaka wokukhathazeka ngokwenza kahle: izizwe zibambana ngolunye ubhubhane lomhlabaukuwa kwezinhlelo zezempilo izinkampani ababone iminyaka yokuzidela idilika ezinyangeni ezimbalwa, izakhamizi ezingashadile ezilahlekelwe isiqiniseko ngokuzayo.
I-2020 kwaba, ngenxa yalesi sizathu, futhi unyaka we yimpi kwabaningi amaqiniso ebhizinisi obekufanele bakhombise konke ukuzimisela kwabo, amakhono abo kanye namandla abo, ikhono lokuzivuselela, ukubhekana nobunzima obungakaze bube khona nezithiyo ezingalindelekile. Lokhu nokunye okuningi obekufanele babhekane nakho izinkampani ezincane nezinkulu ezinyangeni ezimbalwa lokho kwakubukeka njengokuphakade kuwo wonke umuntu.
Kukubunzima ukuthi kufakazela ukubaluleka kwayo: ITrovaWeb nayo ikwenzile ngokusiza izinkampani eziningi
Ngesikhathi ubhadane oluvela ku-Covid-19, izinkampani eziningi kuye kwadingeka zihlele kabusha imodeli yazo yebhizinisi zisebenzisa ukusebenza kahle. I-TrovaWeb naye wayehlukile futhi wakwazi ukuguqula okwakhe isakhiwo senhlangano ukugcina iqinile ukuba seduze futhi i ukutholakala maqondana namakhasimende. Bonke abasebenzi nabahlanganyeli bakwazile ukusungula kabusha indima yabo ngokusebenza ekhaya futhi bahlala bexhumana njalo nozakwabo kanye namakhasimende. Futhi konke kwenzeke ngokushelela nangokuguquguqukayo ukuthi hhayi nje kuphela amakhasimende ethu athembekile angazange abone, kepha aze azizwa a umkhiqizo ophezulu emsebenzini wethu wansuku zonke. Kepha kunokunye. Ukuma eceleni kwe amabhizinisi, izinkampani e Abathengisi ebunzimeni obubonakalayo kule nkathi, i- Ithimba leTrovaWeb ukhulelwe futhi wasebenzisa izixazululo eziningi zokusiza bonke labo ababengazange babe nenkuthalo efanayo ekubhekaneni nalolu bhubhane.
Ukuqina Nesibindi: amagama wokubuka wokuwina kubo bonke ubunzima
Ukuthambekela kwemvelo kokuemisha kukuDNA yethu Ukuqalisa futhi mhlawumbe kungenye yezinsika esiholele namuhla ukuba ngumholi emkhakheni we ukubonakala online kuziswa izwe lonke. Ngokuhambisana nokusungula izinto ezintsha, futhi nomthambo wokudala oqhubekayo kanye nokuzama okuhle okuthe xaxa ekusebenzeni kwabo bonke ochwepheshe, kunqume ubukhulu obungenakuphikwa emkhakheni we Ukuxhumana nge-inthanethi futhi we Ukukhangisa kwewebhu. Eziningi, empeleni, ziyi izixazululo zobuchwepheshe yenziwe yatholakala kumakhasimende kanye nezinto ezintsha ezethuliwe ukuze sizithuthukise: i-e-commerce eyenziwe ngezifiso futhi ilawulwa ngokuzimela okuphelele, i- isignesha yedijithali ku-OTP, inkonzo ye I-Web-sitter futhi i isivumelwano neSicindustria ngezinye nje ze izinsizakalo ezintsha zedijithali yakhelwe ukusiza izinkampani e ochwepheshe.
Ukuqedela ukubuyisela kabusha amahhovisi ethu eMessina kanye ne-Vice-kamongameli wengxenye yeDijithali yaseSicindustria
Da Palermo kufike ukugculiseka okuningi: okuhambisana nesivumelwano no ISicindustria, ITrovaWeb nayo isithole ukuqokwa ku- iphini likamongameli wesigaba seDijithali.
Kodwa okwethu qalisa wacabanga nokwenza kabusha ukubukeka. I- Ithimba le-GetWeb, ithuthukiswe nge-ukuqasha ochwepheshe abasha, ayicabanganga kuphela ngokusekela izinkampani ebunzimeni ngokuphindaphinda izinsizakalo zazo. Ekugcineni isivuselele indawo yayo kanye nophawu lwendlunkulu yayo ku Messina.
Kungenxa yalokhu amandla avuselelwe nogqozi oluvela kubo bonke ubunzima obunqotshiwe kanye nezinhloso ezintsha ezifinyelelwe, lokho I-TrovaWeb izifiso Amaholide amahle kuwo wonke amakhasimende ayo, kuvuselelwa ukusondela kwabo nokutholakala njalo.
Tags: Izindaba ukuqala okuhle thola